IJordani liqeda ukuvalelwa okuvumelekile kwabavakashi bangaphandle
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-Jordan Breaking News » IJordani liqeda ukuvalelwa okuvumelekile kwabavakashi bangaphandle
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zikaHulumeni • Health News • I-Jordan Breaking News • Izindaba • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
IJordani inciphisa izidingo zokungena kwabavakashi bakwamanye amazwe
Iziphathimandla zikahulumeni waseJordania zimemezele ukuthi izivakashi zakwamanye amazwe azisadingeki ukuthi zihlaliswe zodwa lapho zifika eJordani.
Umthethonqubo omusha wasayinwa waqala ukusebenza ngomhlaka 13 Januwari.
Lapho zingena ezweni, izivakashi zakwamanye amazwe kufanele ziveze imiphumela yokuhlolwa kwe-PCR Covid-19, enziwe kungakapheli amahora angama-72 ngaphambi kokuhamba.
Esikhumulweni sezindiza, abagibeli kudingeka bahlolwe kaninginingi (izindleko zensizakalo zingama- $ 40). Uma isivivinyo sikhombisa ukuthi u-positive, lapho-ke izivakashi kuzodingeka ukuthi zizihlukanise, bese ziphinda zithathe isivivinyo.
Ngaphezu kwalokho, abahambi bakhululiwe ekubhaliseni okuyimpoqo kuwebhusayithi ye-VisitJordan.
Futhi, iziphathimandla zendawo ziye zanciphisa imingcele ethile ezweni. Ngakho-ke, isikhathi sokufika ekhaya sakhanselwa ngoLwesihlanu, kepha ubusuku busasebenza.